Christian Cabezas သည် Lectrosonics အားတောင်အမေရိကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ခရစ်ယာန် Cabezas တောင်အမေရိကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Lectrosonics ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ခရစ်ယာန် Cabezas တောင်အမေရိကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Lectrosonics ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ရီယိုချို, မိုင် (မေ 31, 2016) -Lectrosonics, ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များနှင့်ရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်, ပြဇာတ်ရုံ, ဂီတနှင့် installed သံကိုစျေးကွက်များအတွက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ထိုတောင်အမေရိကဘို့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခရစ်ယာန် Cabezas ၏ရက်ချိန်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် ဒေသ။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, Cabezas ကိုလံဘီယာ, ဗင်နီဇွဲလား, အီကွေဒေါ, ပီရူး, ဘိုလီးဗီးယား, Brasil, ချီလီ, အာဂျင်တီးနား, ဥရုဂွေး, ပါရာဂွေး, ဆူရာနမ်, ထရီနီဒက်နှင့်ဂိုင်ယာနာအပါအဝင်ဒေသတလျှောက်လုံး Lectrosonics ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် client များကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။
ဘိုဂိုတာ, ကိုလံဘီယာအခြေစိုက် Cabezas, A / V ကိုမီဒီယာများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထူးစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူအသံအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုရောင်းအားအတွက်အလုပ်နှင့်အဓိကအသံနှင့်အလင်းရောင်ကုမ္ပဏီအတွက်တိုင်ပင်အဖြစ်ဒေသတွင်း၌တစ်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးကိုင်တွယ်ပါဝင်သည်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, Cabezas, အသံအင်ဂျင်နီယာ / အတိုင်ပင်ခံနှင့် VCR များအတွက်ထုတ်ကုန်အထူးကုအဖြစ်ကိုလံဘီယာအတွက် Lectrosonics '' ဖြန့်ဖြူးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးသူကလက်တင်အမေရိကရှိမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်များပတျဝနျးကငျြကိစ္စရပ်များအပေါ်တစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
"Lectrosonics အမြဲဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအဘို့ရည်ရွယ်ထားနှင့်၎င်း၏ client များထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကူညီတဲ့အံ့သြစရာလမ်းရှိတယ်လို့ကုမ္ပဏီ၏, အမြဲတမ်းသူတို့ထုတ်ကုန်များ၏အဓိကထုတ်လုပ်သူများမှာသော်လည်း, သူတို့သည်အသုံးပြုသူများနှင့်တစ်ဦး, လွယ်ကူသောပွင့်လင်းဖော်ရွေဆက်သွယ်ရေးရှိသည်နှင့် client များထံမှတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုသေသေချာချာနားထောင်ဖို့ငါ့ကိုအထင်ကြီးနေပါတယ် "ဟုခရစ်ယာန်ကပြောပါတယ်။ "ငါသည်အစဉ်အမြဲ Lectrosonics မှာအပြစ်တွေများအသင်း၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်ကတိကဝတ်လေးစားပါဘူး, ငါကသူတို့ကို join ဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဂုဏ်အသရေခံစားရတယ်။ ငါကဒေသတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ client များသည်အတူတူပင်ကြီးမြတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသေချာစေရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ "
"ခရစ်ယာန် Lectrosonics အဖွဲ့သည်တစ်ဦးသည်အလွန်တောက်ပနှင့်နိုင်စွမ်းများအပြင်ဖြစ်ပြီး, ကိုလံဘီယာအတွက်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ပြီး install အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုမှကြွလာ," ကားလ် Winkler, Lectrosonics မှာ VP အရောင်း / Service ကိုကပြောပါတယ်။ "သူပြီးသားကြောင်းတိုင်းပြည်တွင်အများအပြားခြံအရောင်းတိုးမြှင့်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတိုက်ကြီး၏ကျန်များအတွက်မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များရှိသည်။ "
အဆိုပါ Lectrosonics အဖွဲ့ခရစ်ယာန်ကြိုဆိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို join ပါ သငျသညျမှာသူ့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် [အီးမေးလျ protected].
ကောင်းပြီ 1971 ကတည်းကရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်နှင့်ပြဇာတ်ရုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလေးစား, Lectrosonics '' ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များနှင့်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှကုမ္ပဏီ၏အပျနှံတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်အသံဖိုင်အင်ဂျင်နီယာများကမစ်ရှင်-အရေးပါပလီကေးရှင်းနေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်။ Lectrosonics ရီယိုချို, နယူးမက္ကစီကိုတွင်အခြေစိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ မှာအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှု www.lectrosonics.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-05-31
ယခင်: သူဟာ Emmy-ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး / ထုတ်လုပ်သူဂျိမ်း Tichenor FuseFX, ဗန်ကူးဗားပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်